Pp Flat Yarn Extruder, Extruder plastika, Pp tenona boribory boribory - IFORCE
IFORCE INTELLIGENT FAMPIANARANA CO., LTD, orinasa feno naorina tamin'ny Oktobra 2001, dia manam-pahaizana manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana milina kitapo tenona. Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia ahitana ireto manaraka ireto: Flat Yarn Extruder ， Cam Winding Machine, Circular Loom Machine, BOPP Pirinty natao tamin'ny milina, Machine Lamination, milina mandeha ho azy Gusseting, Ultrasonic Sealing Machine, Baling Machine, Warn Yarn Bobbin Cleaning Machine, Plastic Crusher ary Recycling Granulator Sns
20 taona niainana famokarana
Niorina tamin'ny 2001, mpiasa matihanina 300+, manana traikefa ampy amin'ny fananganana milina kitapo tenona PP isika.
Manomeza tsipika feno amin'ny fanaovana kitapo misy tenona PP
Afaka manome ny karazan-tsipika famokarana isan-karazany izahay, toy ny tsipika famokarana kitapo PP, tsipika famokarana kitapo BOPP, tsipika famokarana kitapo leno harato ary tsipika famokarana sobika ambany ambany sns.
Masinina manao kitapo PP vita am-paosy avo lenta
Mpiasa matihanina, traikefa amin'ny famokarana manan-karena, haitao mandroso ary famokarana manara-penitra dia alao antoka fa ny vokatra rehetra avy amin'ny orinasanay dia manana kalitao avo lenta.
Ambony aorian'ny fanompoana
Ny fametrahana, ny debugging, ny fiofanana ara-teknika ary ny lisitry ny horonantsary sns.
Mafana kitapo PP ...
Manapaka kitapo harato ...
Kitapo tenona PP manjaitra ...
Milina fanontana (...
Eo aloha sy aoriana Pr ...
Kitapo tenona PP Ult ...
Fanapaka mandeha ho azy ...
Manjaitra mandeha ho azy ...
Hot fanapahana sy C ...
Auto manapaka lava ...
PP mandeha ho azy feno ...
PP tenona simenitra B ...
Loom boribory (4 S ...
Loom boribory (6 S ...
Loom boribory ho an'ny ...
Fanaraha-maso ny solosaina ...
Flexo fanontana Ma ...
Roa manaparitaka iray ...
Masinina manao gusseting ...
Mandeha ho azy Gusseti ...
Ho an'ny tsipika famokarana kitapo vita amin'ny PP iray manontolo, mazàna dia mila milina 14, Fanamainana fanamainana, Auto Feeder, Flat Yarn Extruder, Cam Winding Machine, Circular Loom Machine, Computer Control 6 Colour BOPP Pirinty natao pirinty, iray Extruding Two Die Lamination Machine, Automatic Gusseti ...